Vaovao - Ny fitotoan'ny gorodona dia manondro ny fikolokoloana tany simenitra / vato / terrazzo / epoxy
Ny fitotoan'ny gorodona dia manondro ny fikolokoloana ny tany vita amin'ny beton / vato / terrazzo / epoxy, izay manosika tsara ny terrazzo, ny endrika simenitra, ny epoxy mortar layer ary ny tany epoxy taloha, sns. Vao izao aho no nampiasa ny kiraro mivantana an'ny HTC Diamond Grinding Shoes ho an'ny Concrete sy Terrazzo tany ho an'ny dingana voalohany fikolokoloana henjana, amin'ny fizotran'ny sombintsombiny lehibe kiraro Telolahy Rhombus Fitotoana Vary tsara fikosoham-bary, poloney ary dingana hafa.
Ataovy madio, hazava kokoa, ary malama ny gorodona, amin'izay hanatsarana ny hakanton'ny tany. Fitaovana fitotoan'ny gorodona mahazatra ampiasaina matetika dia ny milina fitotoana gorodona 490, ny milina polishing ambony ary ny fitaovana mifandraika amin'izany.
Ahoana ny fomba fiasan'ny grinding ground grinding block?
1. Fitsaboana ambonimbony: Mampiasà peratra diamondra tsy misy vovoka hanaisotra ny vovoka mitsingevana eny ambonin'ny simenitra ary hamorona faritra misitery eo amboniny. Mampiasà mpanadio banga hialana amin'ny fasika, fako ary vovoka. Atsaharo amin'ny lasantsy na fanamainana ilay faritra lena.
2. Primer: apetaho amin'ny laoniny ny singa mavesatra indrindra sy ny fanamafisana ny zavatra, afangaro amin'ny mixeur ary ampitao miaraka amin'ny borosy, borosy na basy spray raha ampiasaina mba hamoronana loko voaloham-bokatra, ary ny fandefasana loko misaraka ny fotoana Maherin'ny 8 ora.
3. Fametahana eo anelanelany: Makà refy habetsaky ny mpamatsy vola sy fanamafisana, afangaro tsara amin'ny mixeur, avy eo atsofohy ao anaty agregate quartz, aondraho tsara, ampiasao trowel handefasana ilay fangaro etsy ambony eo ambonin'ny primer ao anatin'ny fotoana azo ampiasaina , Ka feno ny lavaka sy ny lavaka.
4. Akanjo ambony: aorian'ny hamafisana ny valan'ny palitao mpanelanelana, raha misy potipotika eo amboniny dia tokony hofongorana aloha izy io, ary tokony hofenoina ny lavaka, ary avy eo maka refy habetsahan'ny mpamatsy vola sy ilay manamafy hanaitra sy hifangaro tanteraka, ary hametahana ilay palitao mpanelanelana amin'ny vata famarana. Mandritra izany fotoana izany, alohan'ny hanosehana simenitra dia ampiasaina ny fanjaitra fanjaitra eo an-dafin'ny resin, mba hahafahana mizara ara-drariny sy manala ireo banga amin'ny rivotra, ka malama sy hamirapiratra ny tampon'ny resina.
Drafitra famolahana vato: dingana iray lehibe ho an'ny fitehirizana vato ny famolahana vato. Ny vato sasany dia azo diovina mivantana.
Ny tena tanjon'ny poloney dia ny fampitomboana ny famirapiratan'ny vaton'ny vato. Ny famolahana vato amin'ny ankapobeny dia tanterahina araka ny fomban'ny fikosoham-bolo → fikosehana semi-tsara → fitotoana tsara → fikosoham-bary tsara → polishing, ary azo esorina ny sasany amin'ireo dingana fikosoham-bolo, indrindra miankina amin'ny hoe nandalo ny tampon'ilay vato tany am-boalohany fitsaboana mialoha.
① Coarse fikosoham-bary: ny fikosoham-bary tsy maintsy maka antsy lava, avo ny fahombiazan'ny fikosoham-bary, marokoroko ny famolavolana, ary masiaka ny velaran'ny tany. Izy io dia manala indrindra ireo mariky ny tsofa tavela tamin'ny vato tamin'ny fizotrany teo aloha sy ny fahalemen'ny vato, Ny modeling dia miorina amin'ny toerany;
②Ny fikosoham-bary tsara: esory ny fitotoan'ny fikosoham-bolo ho lasa tsipika vaovao tsara kokoa, mba ho malama sy malama ny tampon'ny vato;
③Fitotoana tsara: ny lamina, sombina ary ny lokon'ny vato aorian'ny fitotoana tsara dia naseho mazava tsara, milamina sy malama ny tampony ary misy famirapiratanana malemy;
④Fitotoana tsara: Ny ambonin'ny vato aorian'ny fikolokoloana marina, tsy misy soritry ny maso mitanjaka. Mihamalemy kokoa ny aty ivelany, ary ny gloss dia mety hahatratra 55 degre na mihoatra;
⑤ Poloney: Mampiasà milina fandefasana grenety manokana hikikisana ny vato avy eo amin'ny vato misitatra ka hatramin'ny vato tsara hatrany amin'ny No. 50 ka hatramin'ny No. 3000 mba hampamirapiratra sy hilamina toy ny vaovao ny tany. Mamirapiratra toy ny fitaratra ny velarana vato voaravaka, ary maherin'ny 85 degre ny famirapiratany. Araka ny karazan-kazo isan-karazany, ampiasaina ny fomba fanamoriana samihafa.
1. Ny fizotry ny poloney amin'ny tontonana fisaka: zahao ny toetran'ny fanamboaran-dity-lakaoly alohan'ny hanombohana lovia ambony-fanamboarana-manomboka ny loha fitotoana tsirairay avy eo hijerena ny toe-javatra polishing-hanitsy ny masontsivana polishing-fanamainana-savoka, fanadiovana - fonosana fanaraha-maso ambany-birao.
2. Fikirakirana sy fikosoham-bolo eo amin'ny tontonana arc: zahao ny fitaovana-lakaoly fanamboarana-fanodikodinam-bolo fanaraha-maso eo ambony birao-maso alohan'ny hanombohana-fikosoham-bolo-fizarana fikosoham-bary-tsara fikosoham-bolo-fanamarinana-fanamarinana polishing toe-baoritra ambany.
3. Fikirakirana sy fikolokoloana ny tsipika miendrika endrika manokana: zahao ny toetoetran'ilay fitaovana-manamarina raha toa ka mendrika ny manoritra tsipika contour ny endrik'ilay endrika araka ny fenitra madiodio-mitrikitrikitrikina manoto roa mifarana-mitresaka amin'ny tendrony roa mankany amin'ny Antsy fikosoham-bary-manasaraka rano afovoany 400 # Rehefa vita ny famongorana sy ny famolavolana volo.